Wax badan ka ogow xog ku saabsan Qaraxyadii iyo Weeraradii xalay ka dhacay Muqdisho | Wax badan ka ogow xog ku saabsan Qaraxyadii iyo Weeraradii xalay ka dhacay Muqdisho | Hal Sheegaha La Hubo
Wax badan ka ogow xog ku saabsan Qaraxyadii iyo Weeraradii xalay ka dhacay Muqdisho
Waxaa caawa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo iyo weeraro ay fuliyeen dagaalyahano katirsan Al Shabaab, waxaana weeraradan ka dhashay khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dabley hubeesan ayaa xoog uga soo gudbay koontaroolka Sayidka ee laga ilaaliyo xarunta Villa Soomaaliyaa, waxa ayna dableydan toogteen mid kamid ah ilaalada kontaroolka iyagoona kadib usoo gudbay aaga albaabka laga galo Madaxtooyada.
Ragga hubeesan ayaa la sheegay in Baabuurka uga dagteen inta u dhaxeysa Masjidka Isbaheysiga iyo afaafka hore ee M xarunta Villa Soomaaliya, waxayna raggaas qorsheenayeen in ay gudaha u galeen Madaxtooyada.
Baabuurkii ay wateen ragan ayaa ku qaraxy meel ku dhaw albaabka Madaxtooyada, Ciidamada ilaalada Madaxtooyada ayaan dagaal xoogan la galay ragii hubeesnaa oo dagaal saacado kooban kadib goobtaasi lagu dilay.
Qaraxa iyo iska hor imaadka ka dhacay agagaarka Madaxtooyada Soomaaliya waxa aku dhintay askar katirsan ciidanka Ilaalada Madaxtooyada, lamana oga in weerarkaasi dad shacab ah uu khasaaro kasoo gaaray.
Geesta kale, Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray afaafka hore ee Hotelka Dorbin ee kuyaala agagaarka Xarunta Hay’adda Nabad dalka Soomaaliya ee guriga Habar Khadiijo,
Qaraxan waxaa ku dhintay ku dhawaad 20-qof oo u badnaa dad shacab ah oo marayay agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana dadka dhintay ku jira hooyo iyo caruur ay dhashay oo halkaasi ku sugnaa.
Dadka sidoo kale qaraxan ku dhintay waxaa ku jiray ciidmo katirsan dowlada oo ilaalo u ahaa masuuliyiin gudaha Hotelka ku jiray, qaraxan ayaa sidoo kale bur bur xoogan gaarsiiyay Hotelka iyo goobo kale oo ku dhaw.
Al Shabaab ayaa durba sheegatay masuuliyada qaraxyada iyo weerarada caawa ka dhacay Muqdisho, waxa ayna sheegeen Al Shabaab in bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen masuuliyiin iyo ciidamo katirsan dowlada.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan wali shaacin khasaaraha guud ee weerarada iyo qaraxyada caawa Muqdisho ka dhacay ka dhashay, waxa ayna dowlada sheegtay in ay dib kasoo faah faahin doonaan khasaaraha weerarada caawa ka dhashay.